Dreams Khabar प्रकृति जोगाउन भूटानको योगदान
प्रकृति जोगाउन भूटानको योगदान
बुधबार, २४ असोज
PHOTO:Paro Taktsang, better known as Tiger's Nest, is perhaps the most famous site in all of Bhutan. This cliffside temple is home to many monks, and considered to beavery sacred Buddhist site.
भूटान । विश्वमै सबैभन्दा न्यून कार्बन उत्र्सजन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा भूटानको नाम जोसुकैले उदाहरणका रुपमा लिइरहन्छन्, तर व्यापक आर्थिक विस्तारको साटो यी हरित पदचिन्हमा हिँड्ने हिमाली अधिराज्य भूटानको चाहनाले ठूलै चुनौती खडा गरेको छ ।
करिब आठ लाख जनसंख्या रहेको भूटानले राम्रो सिजनमा प्रति पर्यटक दैनिक दुईसय ५० डलर लिन्छ, तर त्यसका लागि पर्यटकको संख्या पनि तोकिएको छ । कतिपय ठाउँमा पर्यटकको घुँइचोले सुन्दरता उजाडिएकामा भूटान चिन्तित छ ।
“हाम्रो वन्यसम्पत्तिको दोहनका लागि ठूलै प्रयास भएका हुन् तर हामीले भविष्य हेरेका छौं,” भूटानको राष्ट्रिय वातावरण आयोगका दासो पाल्जोर दोर्जीले बताउनुभयो ।
भूटानको औसत तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस हुन थालेको छ । स्थानीयबासीमाथि गर्मी र आद्रताले सताउन थालेको छ । “हिउँ पर्ने ढाँचामा समेत परिवर्तन आइसकेको छ । पहिले पहिले यहाँ केही दिन हिउँ पथ्र्यो, आजभोलि मुश्किलले एक दिन पर्न थालेको छ,” भूटानका प्रमुख वातावरण अधिकृत तेन्जिङ वाङ्मोले बताउनुभयो ।
वाङ्मोले तातो हावापानीकै कारण बुम्थाङजस्ता ठाउँमा धानखेती हुन थालेको छ जहाँ पहिले कहिल्यै धान हुँदैनथ्यो । “जलवायू परिवर्तन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हामीले केही गरेका पनि छैनौं तर हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसबाहेक, माथिल्ला हिमाली भेगमा समेत बाढी रोकथाम गर्न नयाँ ढल निर्माणका लागि कामदारहरु खटाउनु परेको छ, वाङ्मोले भन्नुभयो । “यी कामका लागि धेरै रकम र जनशक्ति आवश्यक पर्न थालेको छ । तर त्यस्तो रकमको जोहो गर्न र क्षमता–निर्माण गर्न भूटानजस्ता देशले कसरी सक्छन् ?”
“मेरो विचारमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न तथा प्रकृतिलाई जतिसक्दो मौलिक बनाइराख्न भूटानको योगदान अतुलनीय छ,” दोर्जीले भन्नुभयो । “हाम्रो अभियान समर्थनको लायक छ । हामीलाई बढी होइन, कम्तीमा समान रुपबाट पुरस्कृत गर्नु पर्दछ ।” (रासस/एएफपी)